Dị ihe iji chebe abụọ-kwadoro ụzọ mkpuchi - China Shandong Chen lu
Dị ihe iji chebe abụọ-kwadoro ụzọ mkpuchi
HD02 ụzọ jel (abụọ n'akụkụ ogologo aka uwe) 1, ọrụ: ọ bụ-eji maka nchebe nke X ray, nwere ike dị ka ọrụ dị mkpa na-bụ-eji maka radieshon nchedo (X, gamma ụzarị, nchebe), onye ọrụ nwere ike ịhọrọ dị ka mkpa nchedo usoro ngwaahịa dị iche iche nkọwa (0,5 MMPB gamma ụzarị nchedo n'ozuzu họrọ). 2. Style: ogologo uwe abụọ n'akụkụ, nchebe bụ ihe saa mbara; 3. Materials: American dị ụzọ roba 4. International ọhụrụ ụdị echebe le ...
Ebute Ẹkot: 0.35/0.5/0.75mmpb
ihe: ụzọ roba
HD02 ụzọ jel (abụọ n'akụkụ ogologo aka uwe)
1, ọrụ: ọ bụ-eji maka nchebe nke X ray, nwere ike dị ka ọrụ dị mkpa na-bụ-eji maka radieshon nchedo (X, gamma ụzarị, nchebe), onye ọrụ nwere ike ịhọrọ dị ka mkpa nchedo usoro ngwaahịa dị iche iche nkọwa (0,5 MMPB gamma ụzarị nchedo n'ozuzu họrọ).
2. Style: ogologo uwe abụọ n'akụkụ, nchebe bụ ihe saa mbara;
3. Materials: American dị ụzọ roba
4. International ọhụrụ ụdị echebe ụzọ akpụkpọ, na mba na-eduga ultra-ìhè, na àjà ihe ọṅụṅụ-mkpa, na àjà ihe ọṅụṅụ-adụ echebe ihe onwunwe; E jiri ya tụnyere ndị nkịtị ụzọ uwe, ikwu arọ nke 25 ruo 30 percent nwere ike belata.
5. Good nchedo arụmọrụ, na-edu ndú nkesa bụ nnọọ edo, nkịtị were nke-edu ndú Ẹkot agaghị attenuate;
6. Nye 0,35 / 0.5mmPb ụzọ Ẹkot; Eyi-eguzogide, mfe na-ọcha n'elu ihe iji chebe gị ego na kacha ruo n'ókè;
Human ahụ nchedo isi ngwaahịa: X-ray echebe uwe ụzọ uwe, X-ray echebe uwe, na-edu iko, edu ndú ịchafụ, edu ndú okpu, ụzọ uwe, na-edu uwe, gonadal nchedo, ara nchedo, n'aka ya nche, ogwe aka nchedo , wdg
Product nnyocha usoro (1) ngwaahịa nwalere n'ime 80 KVP, 32 mas, 72 Baịbụl hiwere isi n'ebe ogologo n'okpuru ọnọdụ nke X-ray foto, na mgbe ahụ na-edebe foto nke film, na X-ray film, ma ọ bụrụ na nke nke window, kwuru na-abawanye ihe ọkpụrụkpụ, banye radieshon ike. (2) ma ọ bụrụ na ọ na-egosi ọchịchịrị, ọkpụrụkpụ nke ihe onwunwe ke saịtị na-gbanwere. (3) ma ọ bụrụ na ihu ọchịchịrị ntụpọ doro anya, o nwere ike ịbụ n'ihi na ndị na-emebi ka esịtidem echebe ihe, nke a na-emekarị mere site na-ekwesịghị ịdị ojiji nke na-echebe uwe. (4) ma ọ bụrụ na e nwere otu obere ego nke ọchịchịrị tụrụ, ya na-emepụta n'oge mmepụta nke na-echebe uwe, dị ka pinhole. Ọ e ji adakarị na-egosi na a gbara ọchịchịrị ntụpọ na a dayameta nke ọ bụla karịrị 5mm ga-emetụta ndị na-echebe mmetụta. Ọ bụrụ na a ọnụ ọgụgụ nke ọchịchịrị tụrụ ibu karịa 5mm na-hụrụ, ma ọ bụ ọtụtụ obere na ọchịchịrị tụrụ ga-chọpụtara na, na ọ ga-kwuru. (5) ma ọ bụrụ na e nwere ogologo onyinyo, ọ na-egosi na ụzọ roba nwere ike imebi na ebe, nke e mere site na-ezighị ezi nchekwa nke na-echebe uwe. Product mmezi (1) ngwaahịa a ga-gụrụ ìhè anyanwụ, ebe efep okpomọkụ iyi, na ike kpọtụrụ na ndị ọzọ na ngwaahịa ndị dị otú ahụ dị ka agba, acid, alkali, wdg (2) ngwaahịa a ga-echekwara na a mma-ventilated na jụụ na akọrọ ụlọ. The okpomọkụ bụ 0-30 degrees, na ikwu okpomọkụ bụ 80%. HC06 mgbochi eyi otu kwadoro ụzọ vest: super soft ụzọ roba style: ọbụna n'ahụ ụdị ụzọ ọdịnaya: 025, 035, 05mmpb; Model: L, M, S; Akporo nke ngwa: ji mee ihe maka radiological nchoputa nke ahụ mmadụ nchebe. Afọ nke were: obodo nwere a ofu oge nke 4-5 afọ, uku ogologo were ma ọ bụ ugboro ole nke iji, na ike ịlele-echebe mmetụta nke na-echebe uwe na ya. Lelee usoro: eji n'aka ewepụghị na-emetụ ma ọ bụ wepu ákwà elu, na anya ike chọpụtara, ọ bụrụ na e a atọ nke mgbape, ngwaahịa nwere ike iji, ga scrap na update. Ọ bụrụ na a ọkachamara dose detector nwere ike ịchọpụta n'ókè nke radieshon attenuation, ọ dị mkpa iji chọpụta ma na-echebe ngwaahịa mkpa ka a kụọ.
Previous: Chen lu a ole na ole ihe na-echebe ụzọ jaket ọkara - aka uwe abụọ - aka uwe
Osote: Echebe ụzọ akwa nchekwa maka dị ihe nwere ike ahaziri na 0,5 ụzọ Ẹkot.
2017 Kacha ọhụrụ Fashion Type Cheap ebute uwe mkpuchi akwa
Anti radieshon ebute Uwe mkpuchi akwa
China Factory Tụkwasịnụ Agba ahaziri X-Ray echebe thyroid olu akwa N'ihi na olu
Omenala Mere ebute Rubber Ara Ikpuchido
ahaziri New Design Cheap X Ray radieshon echebe ụzọ uwe mkpuchi akwa
Dental echebe X-Ray uwe
Dental X-Ray Duru Uwe mkpuchi akwa
Ugboro abụọ agha
HD13 Intervenient radieshon echebe uwe
High Quality ebute Uwe
Duru Uwe mkpuchi akwa X Ray Protection
Lead Rubber mpempe akwụkwọ
Fechaa ebute Uwe Mkpuchi Akwa
Medical echebe Duru echebe Uwe mkpuchi akwa
Medical radieshon echebe Ngwa Products X-Ray Duru Uwe mkpuchi akwa
Medical Rediation echebe Duru Uwe mkpuchi akwa akwa
Medical X-Ray echebe Clothing
Ovary echebe X Ray Duru Uwe mkpuchi akwa
Protection x-ray ụzọ onu ogbom
radieshon Protection Duru Uwe mkpuchi akwa Price
X Ray Duru Uwe
X Ray echebe Uwe mkpuchi akwa
X Ray echebe ebute Uwe Mkpuchi Akwa
X Ray radieshon ebute uwe
X Ray Shiled Duru echebe uwe mkpuchi akwa akwa
X-Ray Uwe mkpuchi akwa
X-Ray Duru Uwe mkpuchi akwa
X-Ray ebute Uwe mkpuchi akwa N'ihi Sale
X-Ray Protection Duru uwe mkpuchi akwa
X-Ray echebe Uwe Mkpuchi Akwa
X-Ray echebe Uwe
X-Ray echebe Duru Uwe mkpuchi akwa
X-Ray echebe ebute uwe
X-ray echebe radieshon ụzọ onu ogbom